အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ၀ က်ဘ်ဆိုက်အသစ်ကိုဘယ်တော့မှမ ၀ ယ်သင့်ပါ Martech Zone
ဒါကမုသာဝါဒဖြစ်လိမ့်မယ်။ တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ငါကုမ္ပဏီကိုဘယ်လောက်ကျသင့်လဲလို့မေးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေမရှိဘူး site အသစ်မရ။ မေးခွန်းကသူ့ဟာသူမကောင်းတဲ့အနီရောင်အလံကိုမြှင့်တင်တယ်၊ အဲဒါကငါသူတို့ကိုဖောက်သည်အဖြစ်လိုက်ရှာဖို့အချိန်ဖြုန်းတယ်လို့ဆိုလိုတယ်။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကအစနဲ့အဆုံးပါ ၀ င်တဲ့ static project တစ်ခုအနေနဲ့ website တစ်ခုကိုကြည့်နေတယ်။ ၎င်းသည်၎င်းကိုအဆက်မပြတ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သောကြားခံတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏အလားအလာသည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ထက်ကျော်လွန်သည်
မင်းမှာ ၀ က်ဆိုက်တစ်ခုရှိလို့ဘာကြောင့်စလိုက်ကြတာလဲ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်သင်၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် ယေဘူယျအားဖြင့် digital ရှိနေခြင်း မင်းရဲ့နာမည်ဂုဏ်သတင်းကိုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာမင်းအလားအလာရှိတဲ့ဖောက်သည်တွေကိုအများကြီးလိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေပေးနိုင်တယ်။ မည်သည့်လုပ်ငန်းအတွက်မဆို၎င်းတို့၏ဒစ်ဂျစ်တယ်တည်ရှိမှုသည်၎င်းတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သက်သက်မဟုတ်ပါ။
လမ်းညွှန်ဆိုက်များ - လူတွေကသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေတဲ့ဆိုဒ်တွေမှာပေါ်လာကြသလား။ Angi, Yelp သို့မဟုတ်အခြားအရည်အသွေးလမ်းညွှန်များဖြစ်နိုင်သည်။
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများ - လမ်းညွှန်များနှင့်အတူ၎င်းတို့သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးဆိုဒ်များတွင်ပေါ်လာပြီး၎င်းတို့သည်ထိုဂုဏ်သတင်းကိုကောင်းမွန်စွာစီမံနေသလား။ သူတို့ကပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတောင်းခံခြင်း၊ ၎င်းတို့အားတုံ့ပြန်ခြင်းနှင့်ညံ့ဖျင်းသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုပြင်ဆင်ခြင်းလား။
YouTube ကို သူတို့မှာသူတို့ရဲ့စျေးကွက်နဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းကို ဦး တည်တဲ့ YouTube မှာဗီဒီယိုတွေရှိလား။ YouTube သည်ဒုတိယအကြီးဆုံးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဖြစ်ပြီးဗီဒီယိုသည်အရေးပါသောကြားခံတစ်ခုဖြစ်သည်။
Influencer ဆိုဒ်များ - မျှဝေထားသောပရိသတ်ထံမှကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သြဇာရှိသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများရှိပါသလား။ အဲဒီဆိုက်တွေမှာအသိအမှတ်ပြုခံရဖို့လိုက်ရှာနေသလား။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် -၀ ယ်သူတွေကသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာကူညီဖို့အွန်လိုင်းပေါ်ကသတင်းအချက်အလက်တွေကိုရှာဖွေနေပါတယ်။ မင်းသူတို့ရှာနေတဲ့နေရာကိုရောက်နေတာလား။ မင်းမှာတစ်ခုရှိတယ် အကြောင်းအရာစာကြည့်တိုက် ဒါကအမြဲတစေနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်နေလား။
လူမှုမီဒီယာ - ၀ ယ်သူများသည်စဉ်ဆက်မပြတ်တန်ဖိုးနှင့်ဖောက်သည်များအားတုံ့ပြန်မှုပေးသောအွန်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းများကိုကြည့်နေကြသည်။ သင်ဟာလူမှုကွန်ရက်များနှင့်အွန်လိုင်းအုပ်စုများမှာလူတွေကိုတက်ကြွစွာကူညီနေသလား။
အီးမေးလ်စျေးကွက် - ခရီးလမ်းကြောင်း၊ သတင်းအချက်အလက်သတင်းလွှာများနှင့်အလားအလာကောင်းများသည် ၀ ယ်သူများအားခရီးလမ်းကြောင်းကိုအထောက်အကူပြုသောအခြားပြင်ပဆက်သွယ်ရေးမီဒီယာကိုသင်တီထွင်နေပါသလား။
Advertising ကြော်ငြာ - အင်တာနက်တစ်လျှောက်လုံး၌လမ်းကြောင်းသစ်များရရှိရန်မည်မျှအားထုတ်မှုနှင့်ဘတ်ဂျက်မည်မျှအသုံးချသင့်သည်ကိုနားလည်ခြင်းကိုလျစ်လျူမရှုသင့်ပါ။
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်ဘယ်တော့မှမဖြစ်သင့်ပါ ပြီးပြီ
မင်း website ကဘယ်တော့မှ ပြီးပြီမရ။ အဘယ်ကြောင့်? အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်လုပ်ကိုင်နေသောစက်မှုလုပ်ငန်းသည်ဆက်လက်ပြောင်းလဲနေသည်။ ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုရှိခြင်းသည်သင်ဖွင့်ထားသောရေပြင်ကိုသင် ဦး တည်နေသောသင်္ဘောတစ်စင်းနှင့်တူသည်။ ၎င်းသည်ပြိုင်ဘက်များ၊ ၀ ယ်သူ၊ search engine algorithms၊ ပေါ်ထွက်လာသောနည်းပညာများ (သို့) သင်၏ထုတ်ကုန်အသစ်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ (သို့) အခြေအနေများကိုအမြဲချိန်ညှိရန်လိုသည်။ ဧည့်သည်များကိုဆွဲဆောင်ခြင်း၊ အသိပေးခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းတို့၌အောင်မြင်ရန်သင်၏လမ်းကြောင်းကိုချိန်ညှိရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည်။
အခြားနှိုင်းယှဉ်မှုလိုအပ်ပါသလား။ တစ်ယောက်ယောက်ကိုမေးတာနဲ့တူတယ် "ကျန်းမာဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ။“ ကျန်းမာသန်စွမ်းရန်မှာကျန်းမာသောအစာစားခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့်အချိန်နှင့်အမျှအရှိန်အဟုန်တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်။ တခါတရံမှာဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေနဲ့အဆင်မပြေမှုတွေရှိတတ်ပါတယ်။ တခါတရံဖျားနာမှုတွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျန်းမာလာဖို့ကအဆုံးမရှိဘူး၊ အဲဒါကငါတို့အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှစဉ်ဆက်မပြတ်ထိန်းသိမ်းမှုနဲ့ထိန်းညှိမှုလိုအပ်တယ်။
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်အမြဲတိုင်းတာရန်၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့်တိုးတက်စေရန်လိုအပ်သောအပြောင်းအလဲများစွာရှိသည်။
ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းအားသုံးသပ်ခြင်း - သင်၏ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်သင့်ကိုယ်သင်ကွဲပြားစေရန်ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်ပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်း။ သူတို့ကကမ်းလှမ်းချက်တွေထုတ်တာ၊ အသိအမှတ်ပြုတာကိုမျှဝေတာနဲ့သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်နဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကမ်းလှမ်းချက်တွေကိုညှိတာတို့ကမင်းကိုအရမ်းချစ်တယ်။
ကူးပြောင်းခြင်း Optimization - ဦး ဆောင်သူ (သို့) ၀ ယ်သူစုဆောင်းခြင်းသည်တိုးတက်ခြင်းသို့ကျဆင်းခြင်းအတွက်သင်၏လမ်းကြောင်းလား။ မင်းဘယ်လိုလွယ်အောင်လုပ်နေတာလဲ။ မင်းမှာချက်တင်ရှိလား။ ခေါ်ရန်နှိပ်ပါ။ အသုံးပြုရလွယ်ကူသောပုံစံများ?
ထွန်းသစ်စ Technologies က နည်းပညာအသစ်များမျှော်လင့်လာသည်နှင့်အမျှ၎င်းတို့ကိုသင်အကောင်အထည်ဖော်နေသလား။ ယနေ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက် ၀ င်ရောက်သူသည်ကွဲပြားခြားနားသောမျှော်လင့်ချက်ရှိသည်၊ ကိုယ်တိုင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးလိုသည်။ အကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုမှာချိန်းဆိုမှုစီစဉ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီဇိုင်းတိုးတက်မှုများ bandwidth၊ device များ၊ screen အရွယ်အစား…နည်းပညာများသည်ဆက်လက်တိုးတက်နေပြီးဤအပြောင်းအလဲများကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုဒီဇိုင်းထုတ်ရန်အမြဲမပြတ်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်။
Search Engine Optimization လမ်းညွှန်များ၊ သတင်းအချက်အလက်များ၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းများ၊ သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်သင်၏ပြိုင်ဘက်များသည်ရှာဖွေသူများအတွက် ၀ ယ်လိုအားအကြီးမြတ်ဆုံးရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သောကြောင့် Search Engine တွင်မင်းကိုအနိုင်ယူဖို့ကြိုးစားကြသည်။ သင်၏သော့ချက်စာလုံးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်သင်၏အကြောင်းအရာများအားပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ဤအရေးပါသောကြားခံ၏ထိပ်တွင်ရှိနေရန်အရေးကြီးသည်။
မည်သည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီ (သို့) မည်သည့်ပညာရှင်မဆိုသင့်လုပ်ငန်း၊ အပြိုင်အဆိုင်၊ ကွဲပြားခြင်း၊ သင်၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်သင်၏ဆက်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာတို့ကိုအထူးသတိပြုသင့်သည်။ သူတို့ကဒီဇိုင်းတစ်ခုကိုလှောင်ပြောင်ပြီးဒီဒီဇိုင်းရဲ့အကောင်အထည်ဖော်မှုကိုစျေးသတ်မှတ်သင့်တယ်။ သူတို့သာဒါတွေလုပ်ရင်မင်းနဲ့လက်တွဲဖို့စျေးကွက်ဖော်အသစ်တစ်ယောက်ရှာသင့်တယ်။
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်နည်းပညာ၊ ဒီဇိုင်း၊ ပေါင်းစပ်မှု၊ ပေါင်းစပ်မှုနှင့်သင်၏အကြောင်းအရာများပေါင်းစပ်မှုဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့နေ့ site အသစ် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှခြင်းသည်သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပရောဂျက်၏အဆုံးမဟုတ်၊ ၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်တည်ရှိမှုကိုတည်ဆောက်ခြင်း၏ပထမဆုံးနေ့ဖြစ်သည်။ သငျသညျအလုံးစုံဖြန့်ကျက်အစီအစဉ်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ကူညီပေးနေတဲ့မိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်အတူလုပ်ဆောင်သင့်သည်။
အဲဒါကကြော်ငြာကမ်ပိန်းတစ်ခု၊ ဗွီဒီယိုဗျူဟာတစ်ခုရေးဆွဲတာ၊ ဖောက်သည်တွေခရီးထွက်တာကိုပုံဖော်တာ၊ ဒါမှမဟုတ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာတစ်ခုကိုဒီဇိုင်းဆွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အရာအားလုံးကိုအတူတကွအလုပ်လုပ်ပုံကိုနားလည်တဲ့လက်တွဲဖော်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏အကြံပြုချက်သည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ဘတ်ဂျက်ကိုပစ်ရန်နှင့်သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာကိုဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ရန်လစဉ်သင်ပြုလုပ်လိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဆုံးဖြတ်ပါ။
ဟုတ်တယ်၊ အဆောက်အ ဦး တစ်ခု site အသစ် ၎င်းသည်အလုံးစုံမဟာဗျူဟာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အစဉ်အမြဲပြီးစီးသင့်သောစီမံကိန်းမဟုတ်ပါ။
Tags: ကိုယ်စားလှယ်ရုံးစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုပြောင်းလဲခြင်း optimizationနယူးဝက်ဘ်ဆိုက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဘတ်ဂျက်website ကုန်ကျစရိတ်က်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်း